घर » ईमेल डाटाबेस ब्लगहरू » डिजिटल मार्केटिंग कम्पनी फ्लोरिडा » डिजिटल पुस्ताहरू: कसरी तपाईंको अनलाइन विज्ञापनको साथ शताब्दी आकर्षित गर्ने
फेब्रुअरी 14, 2019 in डिजिटल मार्केटिंग कम्पनी फ्लोरिडा ट्याग कसरी तपाइँको अनलाइन विज्ञापन को साथ शताब्दी आकर्षित गर्ने by जकारिया हुसेन
नयाँ डिजिटल पुस्ता stomping आउँछ। जब हामीले पहिले नै विश्वास गर्‍यौं कि हामी अन्ततः सहस्राब्दीसम्म पुग्न कसरी बुझ्ने छौं, अब यो गर्ने समय छ शताब्दीका लागि मार्केटिंग . youtube दृश्यहरू खरीद गर्नुहोस् यद्यपि तिनीहरू मध्ये धेरै जना अझै उनीहरूका अभिभावकको क्रेडिट कार्डमा निर्भर छन्, तर यो समय प्रतिस्पर्धा अघि बढ्ने र कान्छोलाई आकर्षित गर्न तपाईंको मार्केटिंगमा फिर्ता दिने समय हो।
तर शताब्दी वास्तवमा को हुन्? कुन सामाजिक नेटवर्कमा तिनीहरू लुक्छन्? तपाईंको उपभोग बानी के हो? चिन्ता नलिनुहोस्, यहाँ म तपाईंलाई सबै कुरा बताउँछु जसलाई तपाईंले जान्नु आवश्यक पर्दछ तपाइँको साथ नयाँ पुस्ता जीत
शताब्दी को हो?
म निश्चित छु कि तपाईंले पहिले नै घटाउनु भएको छ, शताब्दीयौं वा पुस्ता जेड हजार वर्षका "साना भाइहरू" हुन्।
1995 र 2010 को बीच जन्मेका, तिनीहरू धेरै विविध पुस्ता हुन्, प्राथमिक स्कूलका बच्चाहरूदेखि ट्वान्सटायोमेथिंगसम्म, जो आफ्नो पहिलो काम खोज्दैछन्। तर यो समय आउँदैछ: यो अनुमान गरिएको छ कि 2020 द्वारा, शताब्दी उपभोक्ताहरूको 40% भन्दा कम हुनेछैन।
तपाइँको विज्ञापन संग शताब्दीमा अझ राम्रो हुन, तपाइँ नि: शुल्क ebook डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ: राम्रो इन्स्टाग्राम विज्ञापनको लागि रणनीतिहरू।
यी केहि विशेषताहरू हुन् जसले हामीलाई अझ राम्ररी बुझ्न तपाईंलाई मद्दत गर्दछ:
तिनीहरू 100% डिजिटल नेटिभहरू हुन् । वाक्यांश "डिजिटल नेटिभ" दुरुपयोग गरिएको छ, तर सत्य यो हो कि यो पहिलो पुस्ता हो जसले वास्तवमा इन्टरनेट वा मोबाइल फोन बिनाको संसारलाई सम्झँदैन; वास्तवमा सबैभन्दा कान्छो फेसबुक, ट्विटर र स्मार्टफोनका साथ हुर्किसकेका छन। यसको विपरित, सहस्राब्दीहरू समस्या बिना नयाँ प्रविधिहरूमा अनुकूल गर्न पर्याप्त युवा थिए, तर उनीहरूले कम्तिमा केही वर्ष पूर्व डिजिटल युगमा बिताए।
ती हजारौं भन्दा कम उपभोक्ता हुन् । नयाँ डिजिटल पुस्ताका सदस्यहरूले मनोरञ्जनलाई महत्त्व दिन्छन् र वस्तुहरूको भन्दा बढी अनुभव गर्दछन्। वास्तवमा, तीमध्ये 72% विचार गर्दछन् कि नयाँ चीजहरू ओभररेट गरिएको छ जबसम्म आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा हुन्छन्। तिनीहरू केहि दशक पहिले किशोरहरूको तुलनामा फेसनलाई पनि कम महत्त्व दिन्छन्।
तिनीहरू बाध्यकारी खरीददारहरू होइनन् । थोरै भौतिक चीजहरूको मूल्यवान् गर्नका साथै तिनीहरूलाई प्राप्त गर्दा तिनीहरू पनि बढी जिम्मेवार हुन्छन्। उनीहरूको आवेगबाट चालित हुनुको सट्टा उनीहरू उनीहरूका खरीद निर्णयहरू होशियारीका साथ विश्लेषण गर्छन्, अनुसन्धान गर्छन्, तुलना गर्छन् र सबै भन्दा माथि अनलाइन समीक्षामा निर्भर हुन्छन् (उनीहरूमध्ये 95% ले उनीहरू खरीद गर्नु अघि परामर्श लिन्छ)। तिनीहरूको खरीद मापदण्डको बारेमा, अधिक मूल्यमा गुणस्तरको मूल्य हुन्छ।
तिनीहरू कम आदर्शवादी छन् र अधिक व्यावहारिकता छ । यदि हामी डिजिटल पुस्तालाई परिवारसँग तुलना गर्छौं भने सहस्राब्दी ठुलो भाईजस्तै हुन्छ जसले सबै पागल कामहरू गरेको छ र शताब्दीयौं त्यो सानो भाई हुनेछ जसले अरूको टाउकोमा ताडना लिएको छ। सहस्राब्दीहरूको विश्व यात्रा, महसुस गर्न र परिवर्तन गर्न चाहने कुराको सामना गर्नुपर्दा, जेनरेशन जेड व्यावहारिक वास्तविकतासँग बढी जोडिएको छ। संकट अगाडि हुर्केका, हजारौं वर्षहरू एक चम्किलो भविष्य उनीहरूको प्रतीक्षा गर्दैछ भन्ने विश्वासका साथ हुर्केका थिए, तर तिनीहरूका कान्छो भाइहरू जान्दछन् कि उनीहरू अझ राम्रो हुन्छन्।
तिनीहरू एकीकरण र स्थिरताको लागि प्रतिबद्ध छन् । इन्टरनेटको साथ बढेकोले उनीहरूलाई संसारभरिबाट मानिसहरू पहुँच गर्न र मतभेदहरूको बारेमा सजग हुनको लागि यसले सजिलो बनाएको छ। यस सामाजिक चेतनाका साथै वातावरण र ग्रहको भविष्य पनि उनीहरूका लागि महत्त्वपूर्ण छ।
सामाजिक नेटवर्कमा शताब्दी
अघिल्लो जस्तै डिजिटल पुस्ताहरू , शताब्दी बहुमत तरीकाले सामाजिक नेटवर्कहरू प्रयोग गर्दछ। जे होस्, त्यहाँ केहि छन् सहस्राब्दीसँग कुञ्जी भिन्नताहरूकि हामीले हाम्रो सामाजिक मिडिया योजनाहरू तिनीहरूलाई अनुकूलित गर्न खातामा लिनु पर्छ।
उनीहरू साथीहरूसँग कुराकानी गर्न रमाईलो सामग्री मनपर्दछन्
जब हजारौं किशोर किशोरीहरू थिए, तिनीहरूले सामाजिक राज्यहरू आफ्नो राज्यहरू अपडेट गर्न र आफ्ना साथीहरूका समाचारहरू हेर्न प्रयोग गर्थे; संक्षेप मा, तपाइँको वास्तविक जीवन को सम्बन्धहरु लाई मजबूत गर्न। तुलनामा, जेनेरेसन जेडले मनोरञ्जन र सामग्री खपतको माध्यमको रूपमा सामाजिक नेटवर्कहरू प्रयोग गर्न बढी समय खर्च गर्दछ .
ब्रान्डहरूको लागि, यो उनीहरूले उपभोग गरेको सामग्री मार्फत शताब्दीका साथ जडान गर्ने उत्तम अवसर हो, तर यसको मतलब यो होइन कि हामीले उनीहरूभित्र विज्ञापनहरू सम्मिलित गर्नुपर्दछ। यसको सट्टा, हामीले सामग्रीहरू सिर्जना गर्न शर्त लगाउनु पर्छ जुन सबै आवाजको बीचमा खडा हुन सक्षम छ र प्रयोगकर्ताहरू आफैं उपभोग गर्न र साझेदारी गर्न चाहन्छन्।
तिनीहरूले कम सामाजिक नेटवर्कहरू प्रयोग गर्दछन्, तर तिनीहरूमा तिनीहरू अधिक समय खर्च गर्दछन्
पछिल्लो दशकमा सामाजिक मिडिया प्लेटफार्मको संख्या बढ्न बन्द भएको छैन तर आश्चर्यको कुरा, शताब्दीयौं उनीहरूसँग सामेल हुन बढी अनिच्छुक छन् को अघिल्लो डिजिटल पुस्ताहरू .
ग्लोबलवेबइन्डेक्सका अनुसार, जेनेरेसन जेडका सदस्यहरू औसत7बिभिन्न सामाजिक नेटवर्क वा प्लेटफार्महरूमा प्रयोग गर्दछन्, अघिल्लो जेनेरेसनको 8 तुलनामा। यसको सट्टामा, एक दिन लगभग3घण्टा सामाजिक नेटवर्कमा खर्च गर्नुहोस्, जबकि हजारौं वर्ष2घण्टा र 39 मिनेट मात्र खर्च गर्दछ।
उनीहरू ब्राण्डहरू भन्दा प्रभावकारीहरूसँग अन्तर्क्रिया मन पराउँछन्
We are Social का अनुसार, शताब्दीयौंले आफ्नो मनपर्ने सेलिब्रेटीहरूको साथ अपडेट रहनको लागि सामाजिक मिडियाको प्रयोग गर्ने बढी संभावना राख्दछ, ब्राण्डको सट्टा कलाकारहरूको अनुसरण गर्न रुचाउँछ। अर्कोतर्फ, मिलेनियलहरू सामाजिक नेटवर्कमा उनीहरूले मनपराउने ब्रान्डहरू पालना गर्दछन, र सम्भवतः नेटवर्कमा भएको ब्रान्डहरूको पृष्ठहरू भ्रमण गर्ने र आफ्ना प्रकाशनहरू साझा गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ।
तपाईंको मार्केटि strategy रणनीतिमा यस प्रवृतिको फाइदा लिन, तपाईं कसरी आफ्नो उत्पादन र सेवाहरूको प्रबर्धन गर्न शताब्दीयौंले प्रशंसा गर्ने प्रभावकारीहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भन्नेबारे सोच्नुहोस्, र माइक्रोइन्फ्लुएन्सरहरूको शक्ति लिन नबिर्सनुहोस् (कम अनुयायीहरूको साथ प्रयोगकर्ताहरू) "क्लासिक" प्रभावकर्ताहरू भन्दा नेटवर्कहरू, तर तिनीहरू प्रत्येकसँग नजिकको सम्बन्धको साथ)।
तपाईंको मनपर्ने नेटवर्कहरू स्नैपच्याट र इन्स्टाग्राम हो
फेसबुक सबै डिजिटल पिढिहरु बीच मा विश्वव्यापी सबैभन्दा लोकप्रिय सामाजिक नेटवर्क हो… शताब्दी शताब्दी। पहिले नै एक्सएनयूएमएक्स स्न्यापचटले फेसबुक किशोरलाई सबैभन्दा बढी लोकप्रिय सामाजिक नेटवर्कको रूपमा पार गर्‍यो अमेरिकी किशोर किशोरीहरूमा, र 2016 को समूहमा 12 वर्षमा प्रयोगकर्ताहरू थप्न जारी छ।
यो प्राथमिकता को एक प्रमुख कारण गोपनीयता हो। सहस्राब्दीहरूले आफूलाई सामाजिक नेटवर्कहरूमा टाढा राखेका थिए, तर शताब्दीहरू उनीहरूले साझेदारी गर्ने कुरामा धेरै शंकास्पद छन्। यसैले तिनीहरू इफिमेरल सामग्रीका साथ बन्द नेटवर्कहरूतर्फ आकर्षित छन् जसले यसले यस पुस्ताको बीचमा इन्स्टग्राम स्टोरीहरूको सफलताको वर्णन गर्दछ।
10 फोर्ब्स सुझाव नयाँ डिजिटल जेनेरेसनमा बेच्न
1) विज्ञापन सिर्जना नगर्नुहोस्, मान सिर्जना गर्नुहोस्
यो सेन्टेन्सियल हजारौं वर्ष लाग्ने विज्ञापनको साथ अझ महत्वपूर्ण छ । किनकि इन्टरनेट र मोबाइल प्रविधिहरूमा पहुँच बिना उनीहरूले जीवनलाई कहिल्यै पनि चिन्न सकेनन्, त्यसैले उनीहरूको ध्यानको मूल्यको बारेमा उनीहरू सजग छन्। विज्ञापनहरू हेर्न तिनीहरू टेलिभिजनको अगाडि कहिल्यै बसेका छैनन् र तिनीहरूले अनलाइन गर्ने योजना पनि गर्दैनन्।
विज्ञापनको सट्टा, तिनीहरूलाई स्रोतहरू, च्यानलहरू र प्रोफाइलहरू प्रस्ताव गर्नुहोस् जुन उनीहरूले खोजिरहेका छन् उनीहरूलाई दिन्छ या त मनोरन्जन, जानकारी वा ट्यूटोरियल द्वारा। कुञ्जी भनेको उनीहरूसँग कुराकानी गर्न प्राप्त गर्नु हो जुन तपाईंले उनीहरूलाई तपाईंको स्वेच्छाले प्रस्ताव गर्नुहुन्छ, तपाईंको सामग्री लागू गर्न को सट्टा।
2) उपस्थिति हेर्नुहोस्
यदि तपाईं एक हुनुहुन्छ भनेर भन्न नेता तपाईको सेक्टरमा, तपाईले यो सुनिश्चित गर्नु हुन्छ कि तपाईको वेबसाइट र मोबाइल अनुप्रयोगको डिजाईन बराबर छ । नयाँ डिजिटल पुस्ताहरू ईन्टरनेटको भिजुअल भाषाको मूल निवासी हुन्, र तिनीहरूलाई राम्ररी चिन्न कसरी सकिन्छ जान्नुहोस् यदि तपाईंले आफ्नो पृष्ठ गत 10 वर्षमा अपडेट गर्नुभएन भने।
यो Z जेनेरेसन उनीहरूलाई आफू उत्कृष्ट हुन भन्न चाहन्न: तपाईं उनीहरूको आँखामा पस्नु पर्छ। त्यसका लागि, तपाइँको वेबसाइटले मोबाइलबाट पूर्ण रूपमा काम गर्नुपर्दछ, तपाइँको प्रोफाइल फोटो भर्खरको हुनुपर्दछ, छविहरू स्पष्ट र राम्रोसँग समायोजित गरिनुपर्दछ ... छोटकरीमा, उपस्थितिहरू महत्वपूर्ण छन्।
3) बेच्नुहोस्, मद्दत गर्नुहोस्
यो सेन्टेन्सियल टेक्नोलोजी र इन्टरनेटको शक्ति राम्ररी जान्नुहोस्। तिनीहरूको लागि, एक अनलाइन प्रभावकार बन्ने क्यारियरको रूपमा मान्य रूपमा क्यारियर हो। यो वास्तविकता हो जुन उनीहरू प्रत्येक दिन उनीहरूको इन्स्टाग्राम पोष्टहरूमा देख्छन्।
र अन्य पुस्ताहरू भन्दा फरक, यससँग तपाईंको सपना वास्तविकतामा बदल्ने उपकरणहरू छन्। धेरैले आफ्नो ब्रान्ड छवि निर्माण गर्न सुरू गर्दछन् र दर्शकहरू सिर्जना गर्दछन् जब तिनीहरू किशोर मात्र छन् .
ब्रान्डका लागि यी प्रयोगकर्ताहरू उपभोक्ता मात्र होइन, सहयोगीहरू वा प्रतिस्पर्धी पनि हुन्। तसर्थ, तिनीहरूसँग कुराकानी गर्दा, उनीहरूलाई चीजहरू सोध्नेबारे नसोच्नुहोस्, तर उनीहरूलाई मद्दत गर्ने, सशक्तिकरण गर्ने र उनीहरूसँग सहयोग गर्ने कुरामा।
4) बहु-स्क्रीन हुनुहोस्
यो सहस्राब्दीहरुको ध्यान कायम गर्न पहिले नै गाह्रो थियो, तर शताब्दीयौंदेखि यो लगभग हराएको कारण देखिन्छ। औसत मा, जेनेरेसन तीन स्क्रीनहरू प्रयोग गरियो (मोबाइल, टेलिभिजन र कम्प्युटर), तर जेनेरेसनयो संख्यालाई पाँचमा विस्तार गरेको छ।
यति धेरै विकल्पहरू छनौट गर्नका साथ, तपाईको ध्यान ख्याल नगर्ने सामग्रीको साथ तपाईले उपभोग गर्न चाहानु हुने कुनै आशा छैन। उदाहरणको लागि, यदि तपाइँ प्रि-रोल विज्ञापन राख्नुहुन्छ भने, यो लगभग पक्कै अर्को स्क्रिनमा जान्छ किन अन्त हुन्छ र तपाईंले उनीहरूलाई प्रभाव पार्ने मौका गुमाउनुहुनेछ।
5) तिनीहरूलाई 8 सेकेन्ड वा कममा सम्पूर्ण कथा भन्नुहोस्
यो नाटकीय लाग्न सक्छ, तर पछिल्लो अध्ययन अनुसार, जेनेसन जेडको सदस्यको औसत ध्यान अवधि केवल 8 सेकेन्ड हो । तसर्थ, यदि तपाईं आफ्नो ब्लगको पोष्टमा क्लिक गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंको भिडियो हेर्नुहोस् वा 'मनपराउनुहोस्' तपाईंको फोटो, तपाईं आफ्नो सामग्री के बारे मा छिटै बताउन सक्षम हुनु आवश्यक छ, किन उनीहरू इच्छुक छन् र कसरी तपाईं तिनीहरूलाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ वा उनीहरुको मनोरन्जन गर्नुहोस्।
यदि तपाइँ हराउन चाहानुहुन्छ भने सेन्टेन्सियल , तपाइँ हुनु पर्छ सकेसम्म छोटो र सरल । निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईको ब्रान्डलाई केहि सेकेन्डमा समावेश गर्नुहोस्, र उत्तम सिर्जनाकर्ताहरूमा विश्वास गर्नुहोस् तपाईंलाई एक संतृप्त समाचार भित्तामा उभिन मद्दत गर्न।
6) तिनीहरूलाई विश्व परिवर्तन गर्न मद्दत गर्नुहोस्
मार्केटोको भर्खरको अध्ययन अनुसार, शताब्दीका 60% ले उनीहरूको कामले विश्वमा प्रभाव पारेको छ र 76% ग्रहमा मानवको पदचिन्हको बारेमा चिन्तित छन्। यद्यपि उनीहरू आफ्ना दाजुभाइहरू जत्तिकै आदर्शवादी छैनन्, उनीहरू पक्का छन् भन्नेमा कुनै शंका छैन।
एकै साथ यो पुस्ता केवल मार्केटिंगको प्रामाणिकता छुट्याउन धेरै सक्षम छ। यदि तपाइँ तपाइँको ब्रान्डको सामाजिक उत्तरदायित्व लाई प्रसारित गर्न चाहानुहुन्छ, तपाइँले के प्रचार गर्नुहुन्छ त्यसलाई अभ्यास गर्नुपर्नेछ र यसलाई हरेक चरणमा प्रदर्शन गर्न इच्छुक हुनुपर्नेछ।
7) सामाजिक वाणिज्यको फाइदा लिनुहोस्
संयुक्त राज्यमा, मेस्सी, जेसी पेन्नी र अमेरिकन ईगल जस्ता ठूला स्टोरहरूले उनीहरूको भौतिक स्टोरहरू बन्द गर्दैछन् ... र तिनीहरू स crisis्कटमा परेको कारणले होइन, तर अनलाइन खरीदहरूको बृद्धिले गर्दा।
नयाँ को रूप मा डिजिटल पुस्ताहरू उनीहरूको ठाउँ लिइरहेका छन्, अनलाइन बिक्री परम्परागत व्यवसाय को विस्थापन गर्दै छन्। 55% का बच्चाहरू 18 अन्तर्गत अनलाइन लुगाहरू किन्न रुचाउँछन्, र 53% पुस्तक र इलेक्ट्रॉनिक उपकरणहरू खरीद गर्न यो प्राथमिकता व्यक्त गर्दछन्।
तसर्थ, यदि तपाईं यो पुस्तामा बेच्न चाहानुहुन्छ भने, तपाईंसँग तपाईंको ecommerce तयार हुनु आवश्यक छ र अनलाइन च्यानल मार्फत उनीहरूमा पुग्नको लागि ठोस रणनीति हुनु आवश्यक छ।
8) समुदायहरू प्लेटफर्महरू भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण छन्
किन आज युवाहरूले मोबाइलमा हुकिएको जीवन बिताउँछन्? धेरै सरल: किनकि यो उपकरण हो जुन उनीहरू साथीहरूसँग कुराकानी गर्न प्रयोग गर्दछन्, चाहे तिनीहरू उनीहरूको वातावरण वा आभासी हो।
कंक्रीट प्लेटफार्म भन्दा बढी, प्रयोगकर्ताहरू स्वाभाविक रूपमा समुदायहरू जुन उनीहरूले रूचि साझा साझा गर्न । त्यसोभए उनीहरूले कुन अनुप्रयोगलाई अधिक प्रयोग गर्दछ भनेर पत्ता लगाउन वेवास्ता गर्नुको सट्टा, उनीहरूलाई कसरी पत्ता लगाउने भनेर पत्ता लगाउन उनीहरूलाई के रूचि छ विचार गर्नुहोस्।
9) सेलिब्रेटीहरूको साथ मार्केटिंग अब काम गर्दैन
यो सेलिब्रेटीहरूको साथ मार्केटिंग जवान पुग्न रणनीति “आजीवन” हो, तर नियमहरू परिवर्तन हुँदैछन्।
यो सेन्टेन्सियल अब प्रसिद्ध जीवनभरको साथ पहिचान गर्न सक्दैन, तर youtubers र इन्स्टाग्रामको प्रभावकारहरूको साथ। र अझ बढि, उनीहरूका 63% भन्छन् उनीहरू वास्तविक विज्ञापनहरू हेर्न चाहान्छन् उनीहरूको विज्ञापनमा सेलिब्रेटीहरू होइन। फेरि, तिनीहरू संग कनेक्ट गर्न को कुञ्जी प्रामाणिकता मा छ।
10) आफ्नो दिमाग खोल्नुहोस्
हामीले पहिले नै टिप्पणी गरिसकेका छौं, सेन्टेन्सियल एक पुस्ता हो जुन भिन्नताका बारे सचेत छ र पहिले भन्दा बढि समावेशी। र ब्रान्डहरूका लागि यसलाई ध्यानमा राख्नु आवश्यक छ।
त्यहाँ धेरै चीजहरू छन् जुन तपाईं गर्न सक्नुहुन्छ तपाईंको मार्केटिंगमा अधिक समावेशीकरण देखाउनुहोस् समावेशी भाषा प्रयोग गर्न बिभिन्न पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू देखाउँदै। तर अन्त्यमा, यो सिद्धान्त र मूल्यहरूको प्रश्न हो।
← खोजी ईन्जिन स्थिति: यसलाई कसरी आन्तरिक लि strategy्क रणनीतिसँग सुधार गर्ने
गिफी कसरी प्रयोग गरिन्छ? सेवा समाचारहरूको बारेमा →